eNasha.com - प्रमोदको सेन्टिमेन्ट्स
डाक्टर बनेर एउटा सम्मानजनक व्यक्ति बन्छु भन्ने सोचेका प्रमोद खरेललाई मूलतः डाक्टरको सेतो गाउन निकै रुच्थ्यो । तर बीएस्सी सक्दानसक्दै डाक्टर बन्ने उनको सपना विस्तारै धूमिल हुँदै गयो । बरु त्यसको ठाउँमा नयाँ सपना उनले सजाउन शुरु गरे- सङ्गीतको डाक्टर बन्ने !
उनको स्वरलाई साथीभाइले प्रशंसा गर्न थालेपछि उनी सङ्गीततिर ढल्किन थालेका थिए । सङ्गीतमै केही गर्ने उद्देश्यले उनले ५/६ वर्ष शास्त्रीय सङ्गीतका धुरन्धर गुरु गुरुदेव कामतसँग सङ्गीत पनि सिके ।
आफूभन्दा कम क्षमता भएका जुनियरहरु पनि भटाभट एल्बम निकाल्ने र भटाभट हिट हुने आफ्नै आँखाले देखेपछि उनलाई पनि एल्बम निकाल्ने रहर चल्यो । त्यसैले लागे, गीत रेकर्ड गर्नतिर । गीत रेकर्ड हुँदै गर्दा उनको क्षमताका कायल सुरताल म्युजिक प्रा.लि.का सञ्चालक श्रीकृष्ण भट्टराईले उनको पहिलो एल्बम 'प्राप्ति' बजारमा ल्याए ।
गीत जति मीठा थिए, उनको जति मिहिनेत थियो, भिडियो जति रुचिकर बन्यो- त्यति एल्बमको बिक्री भएन । केहीले उनलाई भने, उनको गीत लोकआधुनिक शैलीका भएर चलेन । कसैले के भने, कसैले के ।
तर उनलाई आफ्नो गायन क्षमता देखाउनु थियो, त्यसैले बनाए पप एल्बम । 'सेन्टिमेन्ट्स'लाई सोमबार एक कार्यक्रमका बीच विमोचन गरियो । उक्त अवसरमा एउटा म्युजिक भिडियोसमेत प्रदर्शन गरिएको थियो ।
विमोचनबाट ज्यादै प्रशन्न देखिएका प्रमोदले इनशाडटकमसँग भने- "यो एल्बमले मेरो भर्सटालिटी देखाउँछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।" तथास्तू !
बजारमा रिलिज गायक सङ्गीतकार लुकेका कुरा समुद्रपार ट्रयाक बाहिर तातोपीरो क्या बात ! उपलब्धि कीर्तिमान गायिका नेपाली तारा विचार अवार्ड पेज थ्री भिडन्त प्रेम र विवाह कन्सर्ट रुचि